कसरी पीसी खाली पाना एन्टि-फग छ? - YUYAO JIASIDA SUN PET CO।, लिमिटेड
कसरी पीसी खाली पाना एन्टि-फग छ?
समय: 2019-01-24 हिट्स:
भित्री र बाहिरी तापमान भिन्नताहरूले पानीको बाफलाई भित्तामा र ग्रीनहाउसको शीर्षमा सघन बनाउँछ, सानो पानीको थोपा बनाउने र सूर्यको प्रकाशको प्रसारण घटाउने. Polycarbonate खाली पाना को विस्तृत प्रभाव शक्ति के हो? र बिग्रिएको बिरुवाहरू ड्रिप गर्नुहोस्. Polycarbonate खाली पाना को सबै उत्कृष्ट प्रदर्शन को अतिरिक्त, एन्टी-फोग ड्रिप बोर्डसँग तल एक एन्टी-कन्डेन्सेसन एन्टी-फग ड्रिप लेयर पनि हुन्छ, त्यसैले हावामा ओस समान रूपमा बोर्डमा सden्कलन गरिन्छ र साना पानीको थोत्रो बोर्डमा वितरण गर्दछ, ढलानको साथ ( Slats को दिशा) सिधा ड्रप गर्नुको सट्टामा किनारमा स्लाइड गर्नुहोस्.
पीसी खाली पाना बेंड गर्न सक्छ?
वास्तबमा, पोलिकार्बोनेट खाली पाना कुनै पनि अनड्यूशन र वक्रता बिना नै सपाट हुन्छ, तर किनभने पीसी सौर प्यानल को कच्चा माल विशेष हो, पॉली कार्बोनेट सामग्रीको बिभिन्न डिग्रीमा मोड्नको लागि धेरै राम्रो तरीका छ. त्यसैले, एक पीसी सौर प्यानललाई निश्चित चापमा बnding्ग्याउनको लागि तुलनात्मक रूपमा सरल हुन्छ जबसम्म यो स्थापना र स्केलेटनको घुमावको साथ स्थिर हुन्छ।.
केहि व्यक्तिले प्रयोग गरेका छन्. यदि Polycarbonate खाली पाना वास्तवमा झुकेको छ, यो धेरै ठूलो छ, तर त्यहाँ सीमितता छन्. सामान्यतया, राउन्ड पीसी सूर्य प्लेट घेराको दायरा अधिक हुन सक्दैन 175 पीसी सूर्य प्लेटको मोटाई पटक. त्यो भन्नु पर्ने हो, पीसी सौर प्यानलको न्यूनतम झुकाव त्रिज्या हो 175 प्यानलको मोटाई पटक, जुन बुझ्न सजिलो छ.
पीसी सौर प्यानलको प्रदर्शनको कारण, उत्पादनको प्रयोज्यता बलियो छ र कांच प्लेटको रूपमा राम्रो छैन.
अघिल्लो : पॉली कार्बोनेट ठोस पाना क्रेजको कारण के हो?
अर्को : बायर पोलीकार्बोनेटसँग रेल ट्रान्जिटमा विस्तृत अनुप्रयोगहरू छन्